Fandaharam-potoana - Famaritana ao amin'ny teti-bola federaly
Olana Governemanta Amerikana
Fitsapana momba ny fizahozahoana sy ny teti-bola federaly
Fampiasana ny fandaniana fanodikodinam-bola madinika
Ny fepetra famaritana dia ampiasaina hamaritana ny fandaniana fandaniana mandidy ao amin'ny tetibola federaly. Ny fametrahana sequestration dia fomba iray ampiasaina raha toa ka mihoatra ny vola tsy azo ialàna ny vidin'ny fihazakazahana ny governemanta na ny vola miditra ateraky ny vola mandritra ny taom-pivarotana. Nisy ohatra maromaro momba ny fisarahana tamin'ny tantara Amerikana.
Raha tsorina, ny fitrandrahana dia ny fampiasana automatique, ny fividianana fandaniana isan-trano mba hampihenana ny tsy fahampian'ny vola isan-taona.
Ny sehatra farany indrindra dia napetraka tamin'ny alàlan'ny Kaongresy tamin'ny Lalàna momba ny Budget Budget 2011 ary niasa tamin'ny taona 2013. Ny ampahany amin'ny taona 2013 dia mitentina $ 1,2 trillion amin'ny fandaniana mandritra ny sivy taona.
Famaritana ny sequestration
Ny Tanjon'ny fikarakarana ny Kongresy dia mamaritra ny fitrandrahana toy izao:
"Amin'ny ankapobeny, ny fitazonana dia mitaky ny fanafoanana ny loharanom-pahefana maharitra amin'ny ampahany isan-jatony. Ankoatra izany, ny fampihenana ny isan-jatony dia ampiharina amin'ny programa rehetra, ny tetikasa ary ny asa aman-draharaha ao anatin'ny tetibolam-bola. ny fandaharan'asa toy izany, dia manome fepetra sy fitsipika manokana. Izany hoe, fandaharan'asa sy hetsika sasantsasany dia tsy misy fanavakavahana intsony, ary ny programa hafa dia fehezin'ny fitsipika manokana mifandraika amin'ny fampiharana azy.
Ny tanjona amin'ny fametrahana fanodikana fanodikam-bola amin'ny tetibolam-panjakana federaly dia napetraka voalohany tamin'ny volavolan-dalàna amin'ny alàlan'ny tetibolam-panjakana amin'ny alàlan'ny tetibolam-panjakana.
Ny fanenjehana iray dia farafaharatsiny, ary iray mahomby ihany amin'izany. "Ny fahatsinjovana ny fisarahana dia nanjary sahiran-tsaina tahaka izao fa ny Kongresy dia tsy nety namela azy hitranga," hoy ny nosoratan'i Paul M. Johnson, profesora momba ny siansa politika any Auburn.
Ohatra sasantsasany amin'ny Sequestration
Ny sivana farany indrindra dia nampiasaina tao amin'ny Lalàna Fanaraha-maso ny Budget amin'ny taona 2011 mba hampirisihana ny Kongresy hampihenana ny fatiantoka isan-taona amin'ny $ 1.2 trillion amin'ny faran'ny taona 2012.
Rehefa tsy nanao izany ny mpanao lalàna, dia nitarika fanodikodinam-bola ho an'ny tetibolam-panjakana 2013 ny lalàna.
Kongresy lehibe iray ahitana vondrona 12 voafidy avy ao amin'ny tranon'ny solontenan'i Etazonia sy ny Antenimieran'i Etazonia no nofidiana tamin'ny taona 2011 mba hahafantarana ny fomba hampihenana ny trosa nasionaly amin'ny $ 1.2 trillion efa ho 10 taona. Tsy nahavita nifanaraka anefa ny Kongresy Super.
Fanoherana ny fisavana
Ireo mpanao lalàna sasany izay nanohana ny fampiasana ny sehatra toy ny fomba famerenana ny fahasimbana dia naneho ny ahiahiny taty aoriana tamin'ny fandaharan'asa izay niatrika ny fandaniana fandaniana.
Ny mpikarakara ny trano, John Boehner, ohatra, dia nanohana ny fepetra voalazan'ny Lalàna momba ny fanaraha-maso ny kaonty amin'ny 2011 saingy niverina tamin'ny 2012, ary nilaza fa ny fampihenana dia "loza mitatao ho an'ny fiarovam-pirenena ary tokony hosoloina."
Ny Filoha Barack Obama ihany koa dia naneho ny ahiahiny momba ny fitazonana ny mpiasa amerikanina sy ny toekarena. "Ny fanimbana ara-bola mahodina - fantatra amin'ny hoe sehatra - dia manohintohina asa an-jatony maro, ary manapaka asa tena ilaina ho an'ny ankizy, zokiolona, ​​olona manana aretina ara-tsaina ary ireo lehilahy sy vehivavy ao anatin'ny fanamiana," hoy i Obama. "Hihamafy ny fananganana ny toekarena sy ny fananganana asa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahaizantsika hampiditra vola amin'ny laharam-pahamehana, toy ny fanabeazana, fikarohana ary ny fanavaozana, ny fiarovana ny vahoaka, ary ny fahavononan'ny miaramila".
Fanafahana avy amin'ny Sequestration
Ny fizarana manaraka dia mety hitranga ihany koa amin'ny alàlan'ny Pay Act Act of 2010, miaraka amin'ireo tranga sasany. Amin'io lalàna io, ny governemanta federaly dia tsy maintsy manohy manefa ny saram-piantohana ara-tsosialy, ny tsy fananan'asa ary ny tombontsoa avy amin'ny vondron'olona, ​​ary ireo tambin-karama ambany toy ny Medicaid, ny sakafo ara-tsakafo sy ny fidiram-bola fanampiny .
Na izany aza, ny Medicare dia iharan'ny fanodikodinam-peo mihodina. Ny fandaniana dia tsy mety ho latsaky ny 2 isan-jato.
Ankoatra ny tsy fanarahan-dàlana dia ny karaman'ny kongresy .
Ny Lalàm-panorenan'i Etazonia
Nahoana isika no manana lalàna?
NASA tsy manolo-tena ho an'ny Misiona Mars on Safe Mars
Ny rafi-pahasalamana any Etazonia
Ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena voalohany
Izay mety handraisan'ny olona voavela heloka amin'ny Felony dia any Etazonia
Ny Fitsarana Tampony dia manitatra ny fahefan'ny dom-bola ambony
Ahoana no fomba nisafidianana ireo filoham-pirenena sy filoha lefitra
Tokony hanangana rafitra fitsaboana ara-pahasalamana nasionaly ve i Etazonia?
Fomba hanatsarana ny lalàm-panorenana
Fiadidian'ny imperialisma 101: Theory Executive and The Presidential Imperial
Mahatsiaro ny vatana
Biography and Song List of Duo Montgomery Gentry
Andriamatoa Fito mazika
Ny tanjona sy ny tantaran'ny asa fanaovan-gazety
Tanànan'i Shang Dynasty: Tanànan'i Shina fahiny
Ny lanjan'ny Certification Apple
Ahoana no holazainao amin'ny ray aman-dreninao?
Zavatra 10 Tsy Fantatrao Noho ny Zaza Bevohoka ao Amerika
Ny Science of Star Trek
Scorpions tsara indrindra
Uzbekistan | Facts and History
Inona no fahasamihafana eo amin'ny vokany?
Cuánto dinero puedo ingresar en Estados Unidos declarar en Aduana
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Oklahoma
Samihafa karazana famolavolana samihafa amin'ny sosiolojia sy ny fomba fampiasana azy ireo
Fandrobana ny tsaram-borona (Phaseolus vulgaris L)
Ireo toro-làlana 12 tsara indrindra alemana Amerikana hanampy anao hianatra teny alemana
Tanora Tom Morris
University of Florida GPA, SAT sy ACT Data
Bloodletting - Fomba fitondran-tena taloha
Mianara momba ny MySQL Database Management System
Lisitry ny lahateny ho an'ny mpianatra
Vavaka fanavotana mandritra ny herinandro voalohany ho an'ny Advent